1 2 3 4 5 6 7 ... 4481 Enda pasi
« Reply #33: Kukadzi 11, 2008, 05:52:49 pm »
Anodiwa kwazvo inokosha Ini ndakanyora nhetembo kuna ADMINIMZE.
Ini ndoda kunyora pano futi.
Mutsipa wangu wakaonda kupfuura bvudzi ...
Ini ndakakanganisa zvakawanda.
Mhosva zhinji dzisina mhosva
Ndakarwadzisa moyo yakawanda.
Hana yangu yakatonga, pasina kana tsigiro
Ndakarega mazhinji acho.
Panguva ino sarudzo imbudzi,
Chirango chinorema kwazvo, iyi imhosva yako.
nekuti germanxi Ndaida...
Ndakachera migero mumoyo mangu
Nezino rangu nembambo,
Moyo wangu uzere nemakomba.
Ndasiya mazana enguva.
Pakubuda kwetaneru yega yega almancax ,
Handina kukwanisa kumhanyira kumberi kana kumashure.
Ini ndinonzwisisa, hapana ruponeso panguva ino.
Ehezve, hupenyu huchave hupfupi.
Iwe uchatyora chinyoreso mu'Kuitwa ', (jentzsch derki)
Neniwo,almancaxin mumwoyo mako
Ini ndichawana hupenyu sekufa kwangu.
Haufe wakauraya mudiwa wangu
Ndichararama nekusingaperi ...
Mutsipa wangu wakaonda kupfuura vhudzi! Rudyi,
Almanxac pisa nekuda kwako.
« Reply #34: Kukadzi 11, 2008, 06:10:38 pm »
Uye ikozvino, esma hanzvadzi, ndinofanira kubvuma kuti ndinokuyemura chaizvo ... Hapana chinhu icho ruoko rwako, ruoko, mazano asinga svike nazvo, hapana chinhu chisina kukwana ... Zvakanaka, shinga ... Iwe uri tarenda risinganzwisisike ... Halal, ndingati chii ....
« Reply #35: Kukadzi 11, 2008, 06:15:18 pm »
Yakatorwa kubva ku: esma 41 - Kukadzi 11, 2008 na05: 46: 43pm
Yakatorwa kubva: gütig - Kukadzi 11, 2008 pa11: 11: 41 am
Kunyangwe iwe uri wakanaka nemusoro wakadai, hauzotsamwire nekududzirwa kwemafuta. Neichi chikonzero, isu tinogona kufunga nezvazvo sebhokisi remarara remaforamu ... Kana senge padenga reimba panosara zvinhu zvisina basa.
Marara Bhokisi haaa ....
Zvakanaka kudaro ngazvive.
Handisi kutaura chero chinhu izvozvi, ndinokuratidza mushure memwedzi misere.
Chaizvoizvo, uri kutaura chokwadi, izvi zvinogona kunge zviri muForamu "marara emarara".
Ruvengo, ruvengo mauri unogona "kurutsa" apa.
Unogona kusiya zvinhu zvako zvisina basa pano (nhare mbozha, Mari, mabhegi nezvimwewo).
Ino inzvimbo yakachengeteka kwazvo, usazvidya moyo.
Oo, usatsamwa, ndapota, handigoni kumira ... Saka pakarepo ndakafunga nezvazvo, ndakazvinyora ... ndakanga ndisina chinangwa chakaipa, ndinopika ...
« Reply #36: Kukadzi 11, 2008, 06:16:52 pm »
Yakatorwa kubva ku: esma 41 - Kukadzi 11, 2008 na05: 52: 49pm
Uchaisa nhetembo mumaziso edu zvakanaka
Huya, ndinoregerera, handikwanise kukurambidza
« Reply #37: Kukadzi 11, 2008, 06:22:49 pm »
Yakatorwa kubva: gütig - Kukadzi 11, 2008 na06: 10: 38 pm
Ini ndinobvuma chaizvo. Ndatenda, gutig!
« Reply #38: Kukadzi 11, 2008, 06:32:56 pm »
Shamwari, ndinogona kukubvunza chimwe chinhu ... unogona kunyora mazita evasikana vakanaka nevakomana vaunoziva pano kwandiri, kana iwe uchifunga nezvazvo Pamwe iwe uchazotaura kare, asi mazuva ari kupfuura nekukurumidza. Ndiri kutofunga nezvavo. Ehezve, ndipe kamufaro zvino
« Reply #39: Kukadzi 11, 2008, 06:50:22 pm »
nisa kana azra kana ari musikana
Kana ari murume, dolphin iri emre kana aegean
Ehezve, chakanyanya kukosha chinhu kuva hutano ...
Nakidzwa nemafaro akanaka aya sezvaunoda, mudiwa ...
Zvakanaka kugovana nesu zvakare
mazita angu akawandisa ....
« Reply #40: Kukadzi 11, 2008, 06:53:46 pm »
Ndatenda Sinem nekugovana ... ini ndichafunga nezvese zvakanyorwa pano imwe neimwe ... Kana zvikauya mupfungwa, chichava chirimo zvakare Kutenda mberi ...
« Reply #41: Kukadzi 11, 2008, 07:05:08 pm »
Kana paine chingwa, ndinofunga kana tariro ari musikana, sude
« Reply #42: Kukadzi 11, 2008, 07:11:00 pm »
shamwari yangu Ahsen Berra akange aisa zita remwanasikana wake uye akafunga nezve zita rekuti Nihle zvakanyanya.
Vakatsvaga mazita kwemwedzi mipfumbamwe asi havana kukwanisa kuvatumidza mumavhiki maviri pakazvarwa mwana.
Ndinovimba unosarudza zviri nyore uye wozvara mwana ane hutano
munyu wegungwa, chiratidzo chemvura
iyo nzira yekusataurira mazwi kusara kwega oga ....
« Reply #43: Kukadzi 11, 2008, 07:27:14 pm »
Yakatorwa kubva ku: a_ysche - Kukadzi 11, 2008 na05: 51: 57 pm
ooo unogamuchira esma41 ..
kwete kwete esma41 Bond
Chero bedzi iwe uchibvunzwa nezve kuchengetedzeka kwenzvimbo ino, ndine chokwadi chekuti tinogona kuzvikanganwa isu, kwete pano, tichisiya zvinhu pano.
Kwete, usazvikanganwa iwe, ndapota.
Zvinhu zvako zvakakwana ...
1 2 3 4 5 6 7 ... 4481 Enda kumusoro